ကြားသိရသမျှ Archives - Myanmar Celes Media
မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံကို သက်သေပြသွားသူများ
Aba Sayar July 2, 2019
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က မနိုင်ဝန်ကို မရမက ထမ်းနေတဲ့ ပုံရ်ပ်လေးတွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး ဘဝအမောပြေ ကြည့်နိုင်စေရန်အတွက် တစ်ပုံချင်းစီကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီပုံလေးတွေမှာဆိုရင် ကိုယ်တင်နိုင်တဲ့ဝန်ထက်ပို ပြီး တင်ပြနိုင်တဲ့ တချို့သော သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးလေးစားမိသလို တချိုပုံရိပ်တွေ ဆိုရင် ဘယ်လိုတောင် လုပ်လိုက်ပါလိမ့်ဆိုပီး…
အမျိုးသမီး သုံးဦးလျှင် တစ်ဦးမှာ အစားအ​သောက်​ကို ဖရီးဂုံး ဆင်းပြီး အလကားစားချင်လို့ ချစ်​သူရည်းစားထားကာ Date လုပ်​ခြင်းဖြစ်​ဟု ဝန်ခံချက်ပေး
Aba Sayar June 30, 2019
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Date တာဟာ သိပ်ပြီး လွယ်ကူလွန်းနေပါပြီ ယခင်တုန်းကတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ Date ရဖို့ဟာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိပြီး၊ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့တောင် စာပို့စာယူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းမျိုးရှိမှ အဆင်ပြေတာမျိုးပါ အခုခေတ်မှာတော့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေ တစ်ရှိန်ထိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ Date ဖို့က သိပ်မခဲယဉ်းတော့ပေ ဒါ့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုခြင်းလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပြီး…
သူ့တို့ကို ခြေထောက်နဲ့ကန်တဲ့ ကားပိုင်ရှင်ကို Suprise လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ခွေးလေးတွေ
Aba Sayar June 29, 2019
ခွေးဆိုတဲ့ သတ္တဝါမျိုးဟာ သူတို့ကို ရန်မမူရင် သူတို့ဘက်ကလည်း ရန်ပြန်မမူတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် သူတို့ပါသာ သူတို့ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအဖြစ်အပျက်လေးမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံ ချုံကင်းမြို့ရဲ့ ကားပါကင်နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားပါကင်နေရာမှာ ကားထားစရာ နေရာအများကြီးရှိပေမဲ့ ကားပိုင်ရှင်ဟာ ခွေးတွေက အိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာကို သွားပြီး ကားပါကင်ထိုးခဲ့ပါတယ်။…
မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီး ထံ ဖူးမျော် ရန် လာေ ရာက်ကြသော နတ် ဗြဟ္မာများ
Aba Sayar May 26, 2019
*ကျေး ဇူးေ တာ် ရှင် မ ဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးသုဝဏ္ဏသျှမ်တောင်တော်မြတ်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်ကာလ ၁၃၅၇ ခုနှစ်က ဖြစ်သည်။ *ကွန် ဟိန်းမြို့နယ် ဆရာဝန်ဒေါက် တာတင်ဋ္ဌေးကအောက်ပါအတိုင်းအားပါးတရပြောဆိုခဲ့၏။ “တစ်ရ က် သား ကျွန်တော်က ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေထောက်အနာ ဆေးထည့်ပေးဖို့တောင်ပေါ်ကိုလာတဲ့ အခါ သာစည်က ကိုရန်လင်းတို့အဖွဲ့လည်း ရောက်နေကြတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖူးလို့မဝတော့…
.ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့ မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်း ..!,
Aba Sayar May 24, 2019
ကလော အင်းလေး ပင်းတရ ဘုရားဖူးသွားရင်… ရွာငံရေပြာအိုင်မရောက်ခင်လေးမှာ… မိန်းမရဲတောင်ရဲ့ အလှ အပကိုစိတ်ဝင်စားလို့ သွားကြဘုရားဖူးကြFacebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့ နေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ရဲ့ သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့. . နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး…
ဖေ့ဘွတ်ကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်
Aba Sayar May 22, 2019
တကယ်ရှိတယ် Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက် ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီး သွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messenger လေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူးး။ ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာ Fbဆိုတဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိ တာ…
(၇)နှစ်ကြာချစ်ခဲ့ကြပြီးနောက် အသက်ပြည့်တာနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆရာနဲ့တပည့်
Aba Sayar December 28, 2018
အသက်ကွာဟမှု မနည်းမနောရှိကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ အကြောင်းကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဖော်ပြမယ့်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီးသွားလျှင်တော့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အချက်လေးတစ်ချက်ကို တွေ့ရမှာပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဟာ အသက် (၁၄) နှစ်ကွာဟလှတဲ့ ကျောင်းသူတပည့်မလေးနဲ့ မထင်မှတ်ထားဘဲ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာနဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီး ကလေးမလေးက (၁၃) နှစ်သာရှိသေးတာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးကို ဘယ်သူကိုမှမပြောဘဲ…
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် ဗိုက်ကြီးတာထက်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလေးရှိသေးလို့ပါ !!!
Aba Sayar October 3, 2018
အပျို​ပေါက်​ ညီမ​လေးတို့​ရေ.. ဗိုက်​မကြီးသွား​ပေမယ့်​ ဗိုက်​ကြီးသလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ဒီတစ်​ခါ အကိုက​​ပြောပြချင်​တယ်​ ချစ်​လို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ၊ အ​ပျော်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတူ​နေကြပြီးတဲ့​နောက်​ ​နောက်​ဆက်​တွဲဆိုးကျိုးထဲမှာ(ဗိုက်​ကြီးတာအပြင်​) ဘ၀ပျက်​​စေ​လောက်​တဲ့ အ​ကြောင်းအရာ​နောက်​တစ်​ခုရှိပါ​သေးတယ်​.. အဲဒါက ဒီ​ခေတ်​ထဲ အင်​မတန်​​ခေတ်​စားလှတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်​ထားခြင်းပါပဲ..။ အကို့ဆီ မကြာခဏဖုန်းဆက်​အကူအညီ​တောင်းကြတဲ့အထဲ အဲဒီ ဗီဒီယိုကိစ္စ​တွေက အ​ကြောင်းအရာအများဆုံး..။ (ကိုယ်​၀န်​ပြဿနာ ထက်​​တောင်​…
The Friend (အိမ်ထောင်ရေး) မြန်မာဇာတ်လမ်းတဲ့ တိုးတက်လာပြီပဲ
The Friend (အိမ်ထောင်ရေး) ဇာတ်လမ်း Night Scene ..Sexy ကျကျရိုက်ရတာကြောင့် ရိုင်းစိုင်းမှုများပါရင် နားလည်ပေးပါ ကျနော်တို့တွေ အခုခေတ်မှာ ပန်းအိုးကျကွဲ့တာလို့ နှင်းဆီပန်းကြွေကျတာလို့ မရိုက်ပြချင်တော့ဘူး အနီးစပ်ဆုံးတူအောင် ရိုက်ကူးချင်းဖြစ်ပါတယ် တဲ့ လေးစားစွာဖြင့် လေပြေ ========= မွနျမာကားတှတေိုးတကျလာပွီ မူရငျးတငျထားတာကိုကွညျ့လိုကျပါဦး The Friend…